I-marine isinqe kunye neepepile eziswiti | Ukupheka kweKhitshi
Ithenda yepelepele ebomvu ebomvu
UMaria vazquez | | Cuisine yesiNtu, Ukupheka kwenyama
Abanye ipequillo pepper Banokuguqula nasiphi na isitya senyama. Singazikhupha size sizikhonze ngaphandle kokucinga nzulu, kodwa siya kuzuza iziphumo ezingcono ukuba confit ngobushushu obuphantsi kunye nee-clove ezimbalwa zegalikhi kunye nenkathalo eninzi. Isongo sayo sokugqibela siyakulungiselela, ngokuqinisekileyo.
Kuthekani ukuba songeza ezinye iifilitha ze isinqe solwandle? Siya kuba nesifundo esikhulu sesibini ukuba sonwabe ngalo naliphi na ixesha enyakeni. Umbala obomvu weplate yeyona nto inomtsalane kwiliso, jonga! Isonka esincinci selali kunye nesitya esilula njengale siya kuba sisindululo esikhulu.
I-casserole yethenda ehlanjwe kunye nepelepele ebomvu; iresiphi elula kunye nokulunywa okumnandi.
1 imbiza yepepquillo pepper
I-6 zetreyini zethenda eziselwandle
Sinxiba ezantsi kwe-casserole enkulu ngeoyile, ngokwaneleyo ukuze iipepile zingoyiswa. Sitshisa phezu kobushushu obuphantsi.
Gweba igalikhi kunye saute kwi-casserole bade baqale ukuthatha umbala.
Yongeza iipelepele, usasaze kakuhle kuwo wonke umphezulu we casserole. Sipheka ngobushushu obuphantsi imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30, ishukumisa i-casserole amaxesha ngamaxesha.
Ngelixa, Siziqhekeza ii-steaks i-pickled loin enongwe ngetyuwa nepepile.
Sibeka I-steaks kwi-casserole kwaye mabapheke imizuzu emi-5 nepelepele ukuze ezinyibilikayo zinyibilike.
Sikhonza kunye ityiwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » Ithenda yepelepele ebomvu ebomvu
UJaime Mendez del Valle sitsho
Phendula kuJaime Mendez del Valle
Umbuzo omnye, kodwa ngaba ithenda yesiqhelo iqhelekile okanye ngaba ihlanjiwe? kuba efotweni kujongeka ngathi ngumqolo oqhelekileyo. Enkosi:)
Nangona isenokubonakala ngathi ayifakwanga, iyachaphazeleka 😉 Kodwa ungayenza nge-loin entsha.
Imifuno yemifuno kunye neenkukhu